Pierre-Emerick Aubameyang oo laga doonayo horyaalka China Super League. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Pierre-Emerick Aubameyang oo laga doonayo horyaalka China Super League.
Pierre-Emerick Aubameyang oo laga doonayo horyaalka China Super League.
Posted by: radio himilo January 9, 2018
Muqdisho – Borussia Dortmund weerar-yahankeeda Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo warramayaa inuu rajeynayo ka tagista kooxda Jarmalka, ka hor inta uusan u dhaqaaqin horyaalka China Super League.
Sina Sports, ayaa sheegtay in xiddiga reer Gaboon uu ku sii jeedo dalka Shiinaha halkaas oo uu ku aadi doono heshiis qaali ah, iyadoo Guangzhou Everande la rumeysan yahay inay wadahadalo heer sarre ah ay la galayaan ciyaaryahanka, waxeyna doonayaan in ay soo gaba-gabeeyaan saxiixa laacibkan ku wanaagsan gool dhalinta.
Kooxdan ka dhisan Chinese Super League ayaa la rumeysan yahay inay dooneyso u dhaqaaqidda Aubameyang, iyadoo ku dooneysa heshiis gaaraya 63.5 milyan oo ginni, haddii lagu guuleysto wadahadalada, waxaa la arki doonaa laacibkan oo ka tagaya kooxdiisa haatan.
Pierre-Emerick Aubameyang aya si aad ah loola xariirinayey kooxda ka dhisan caasimadda England ee Arsenal Todobaadyadii lasoo dhaafay, hayeeshe tababaraha kooxda Arsenal Mr. Winger ayaa ka dhaga-adeegay soo xera galinta laacibkan ku haboon dhameystirka goolasha.
Inkastoo, Real Madrid Chelsea iyo Man Utd iyagana lala xariiriyey saxiixa laacibkan sanadihii lasoo dhaafay hadana kuma aysan guuleysan in ay lasoo wareegaan, Man Utd oo Xagaagii Xirmay lasoo wareegtay Lukaku iyo Chelsea oo Banki-ga u jabisay Morata ayaana hoos u dhigay xiisaha laacibkan ee kooxaha England.
28 jirkaan ayaa dhaliyay 13 gool, waxuuna caawiyay labo gool oo kale 15 kulan oo Bundesliga uu u saftay xilli ciyaareedkan, halka sidoo kale uu ka mid yahay kooxda ku guul-dareysatay in ay kasoo baxdo wareega guruub-yada ee Champions League xilli ciyaareedka.
Dortmund ayaa kaalinta 3aad kaga jirta horyaalka Jarmalka, 13 dhibcood ayeyna ka hooseysaa hogaamiyaasha Bayern Munich.
W/Q: Abdi Aziz Adan Urur
Previous: Makula tahay in cabitaanka qabaw uu dhibaato caafimaad keeni karo?
Next: Burnley oo xaqiijisay in ay lasoo wareegtay Georges-Kevin Nkoudou.